जडीबुटीले फेरिदियो वनको चिनारी
सुर्खेत, असोज २४ गते । वीरेन्द्रनगर ४ स्थित भैरम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यतिबेला फरक चिनारी बनाउन सफल भएको छ । अहिले उक्त वनलाई वनस्पति अध्ययन केन्द्रको रूपमा चिन्न थालिएको छ । वन संरक्षण मात्र नभई अन्य जडीबुटीहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणसमेत गर्न थालिएपछि सो वनको चिनारी फरक भएको हो ।
वनले दुई वर्षको अवधिमा ८३ हजार टिमुरका बिरुवा रोपेको छ । एक लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म ८३ हजार बिरुवा रोपिएको छ । यस्तै दुई हजार तेजपात, ६ सय च्युरी, दुई हजार अम्रिसो, सात सय बाँस, तीन सय लप्सी, पाँच सय बेलका बिरुवाहरू आफ्नो वन क्षेत्रमा रोपेको वन समूहका अध्यक्ष अमरबहादुर कार्कीले जनाउनुभयो ।
सबै बिरुवाहरू माटो परीक्षणपछि रोपिएका हुन् । अहिले २५ हजार टिमुरका बेर्ना तयार पारिएको छ । टिमुरका बेर्ना बिक्रीका लागि तयार पारिएको हो । प्रतिबिरुवा रु. ६० तोकिएको छ । त्यतिमात्र होइन हर्रो, बर्रो, कुरिलोजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पनि लगाइएको समूहले जनाएको छ ।
काठ बिक्रीबाट मात्रै आम्दानी गर्ने नभई विभिन्न जडीबुटीहरू लगाइ त्यसबाट पनि आम्दानीको स्रोत बढाउन बिरुवा रोपिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । आगामी वर्ष वनले बिरुवा बिक्रीबाट मात्रै आठ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै टिमुर खेतीका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोही वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विस्तार गर्न लागिएको छ । सुर्खेतको पुरानो सदरमुकाम गढीदेखि आउन पैदल मार्ग बनाउने लक्ष्य वन समूहले लिएको कार्कीले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको लडाइँमा दिवंगत भएका चारजना शहीदको सम्झनामा सोही वन क्षेत्रमा शहीद पार्क निर्माण गर्न लागिएको छ ।
त्यसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वन समूहको सहयोगमा अहिले गुरुयोजना र खानेपानी निर्माणको काम सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त पार्कलाई कर्णाली प्रदेशकै नमुना पार्क बनाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष नीलकण्ठ खनालले भैरम सामुदायिक वन अहिले अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास हुन लागेकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसले प्रदेशकै वन समूहको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । सोही वडावासी एवं कर्णाली प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त वन क्षेत्रभित्र जैविक पदमार्ग बनाउन र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनाइ छ ।